ရာသီလာရင် ကိုယ်ဝန်မရှိဘူးလား . . . – Healthy Life Journal
Posted on မေ 16, 2018
မေး. အခု ကျွန်မရာသီလာတာ ပုံမှန်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်ရှင့်။ အဲ့ဒါ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဘူးလို့ ဆိုလိုနိုင်လားရှင့်။ ရာနှုန်းပြည့်မရနိုင်ဘူးလို့ ဆိုနိုင်လားရှင့်။ အဆင်ပြေရင် ဖြေပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။
Lin Thu (FB)
ဖြေ. ရာသီပုံမှန် ဟုတ်၊ မဟုတ်ဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နည်းနည်းစီကွာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရခါစမှာလည်း တချို့က ပုံမှန်သွေးဆင်းသလို မဟုတ်ပေမယ့် အနည်းငယ် သွေးစွန်းရုံလောက် သွေးဆင်းတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ကို ပုံမှန်သွေးဆင်းရင်တော့ ကိုယ်ဝန်မရှိလို့ပြောနိုင်ပြီး မသေချာရင်တော့ ဆီးစစ်ကြည့်တာအကောင်းဆုံးပါ။
Related Items:Menstruation, Pregnancy